राति सुत्नु भन्दा अगाडी अलैंची र तातो पानि पिउँदा हुन्छ यस्तो फाइदा ! -
राति सुत्नु भन्दा अगाडी अलैंची र तातो पानि पिउँदा हुन्छ यस्तो फाइदा !
अलैंची, हरेक घरको भान्सा भेटिने गर्छ भने हाम्रो घरको भान्सामा बन्ने धेरै परिकारहरुमा स्वाद बढाउनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हाम्रो दैनिकी खानेकुराहरुमा मात्र नभई बजारमा राखिएको मिठाई तथा अन्य परिकारहरुमा समेत यसको प्रयोग गरेर मिठास थप्ने काम गरिन्छ। यसको अलावा अलैंचीको प्रयोगले हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न रोगहरु कम गर्ने वा नँया रोगको संक्रमणबाट जोगाउने काम समेत गर्दछ। आज हामी तपाईलाई रति सुत्नु भन्दा अघि २ वटा अलैंची सँगै १ गिलास तातो पानी खाने गर्दा हुने विभिन्न फाइदाहरुको बारेमा बताउन जाँदै छौँ।
१.शरिरको तौल घटाउछ :आजभोलि दैनिक खानपानमा ध्यान दिन नसक्दा धेरै मान्छेहरुमा तौल बढ्ने समस्या आउने गरेको छ। तौल बढ्नु शरिरको लागि नराम्रो नहुने भएपनि यसले विभिन्न रोगहरु निम्त्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो समस्याबाट बच्नका लागि हामीले अलैंचीको साथमा घरेलू उपाए अपनाउन सक्छौं। दैनिक रुपमा अलैंचीको खाने गर्दा शरिरमा जम्मा भएको बोसो पग्लिने र शरिरको तौल घटाउन मद्धत गर्दछ।
२.कपाल झर्ने समस्याको रोकथाम हुन्छ :दिनभर विभिन्न स्थानहरुमा घुम्दा र काम विशेषले हिँडदा प्रदुषित वातावरणको कारणले कपालमा असर हुने र कपाल झर्ने समस्य आउने गर्दछ। यदि तपाईको पनि यस्तै कपाल झर्ने समस्या छ भने बेलुका सुत्नु अघि २ वटा अलैंचीको साथमा तातो पनि खानु धेरै फाइदाजनक हुने गर्छ।
३. पाचन प्रणाली मजबूद बनाऊँछ :दैनिक अलैंचीको सेवन गर्दा पाचन प्रणाली बलियो बनायो मात्र नभई पेट सफा गरि शरिरलाई आनन्दित महशुस गराऊँछ। शरिरको शक्ति बढाउन वा पाचन प्रणालीलाई सहि तरिकाले संचालन गराउनको निम्ति नियमित रुपमा अलैंची सेवन गर्ने गर्नुपर्छ।
४. शरिरको रगत सफा गर्न :डण्डीफोर वा दागले दागले आफ्नो अनुहारको सुन्दरता बिगार्ने काम गर्छ। त्यसैले अलैंचीको सेवन गर्दा शरिरको रगत सफा रहनुको साथै यसले शरिरको रक्त संचारमा सुधार ल्याउने काम गर्छ। रगत सफा हुँदा शरिरमा कुनै प्रकारको डण्डीफोहोर वा एलर्जी हुने समस्या बाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
यसबाट तपाईले अलैंचीको सेवनबाट हुने विभिन्न फाइदाहरु जान्न सक्नुहुन्छ। यसको सेवन गर्दा तपाईले सामान्य समस्याको लागि औषधि समेत सेवन गर्नु पर्दैन। त्यसैले अलैंची स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायी हुने गर्छ। बिगुल न्युज बाट
यौन जिज्ञाशा ! – म २५ बर्षीय बिबाहित पुरुष हु | मै...
पुरुषले खाली पेटमा लसुन खानुपर्ने ७ कारण...
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ ...
क्यान्सर देखि ५० थरिका रोग ठीक पार्ने साग, जुन नेप...
जन्डिस’ रोग या लक्षण ? सात भ्रम र यथार्थ, सक्दो से...
यस कारण राति सकुशल सुतेको मान्छे बिहान मृत भेटेन्छ...
Nextइमान्दार अर्यालले दिए बाटोमा भेटिएको १० तोला सुन